कालीप्रसाद बाँस्कोटा चोर संगीतकार !
काठमाडौँ । मौलिक संगीतकारको छवि बनाएका कालीप्रसाद बाँस्कोटामाथि अहिले चोरीको आरोप लागेको छ । उनले भर्खरै बजारमा ल्याएको ‘इन्स्टाको फोटो’ गीत फ्रान्सेली गायिका कार्ला ब्रुनीले गाएको एक फ्रेन्च गीतबाट कपी गरेको आरोप लागेको हो । दुवै गीत सरर सुन्दा हुबहु लागेपछि दर्शकले नै अहिले कालीप्रसादको नाम गालीप्रसादमा परिणत होला भन्ने चिन्ता भइसक्यो ! किनभने उनलाई दर्शक तथा स्रोताले गाली गरेको गरै छन् ।
हुन पनि दुवै गीतको इन्ट्रो म्युजिक पनि उस्तै छ । विडम्बना त के भने चोरीको आरोप लागेको गीत युट्युव ट्रेन्डिङमा अगाडि नै आएको छ र त्यसैमा काली मख्ख छन् । उनलाई लागिरहेको आरोपमाथि उनी मौन छन्, मोबाइल पनि अफ छ । सामाजिक सञ्जालभरि गुनासो सुनिन्छन, ‘भाइरल नै नेपाली म्युजिकको भइरस निस्किए ।’ अmभ केही त गीत चोर्ने मामिलामा पहिला शम्भुजित बास्कोटा, अहिले कालीप्रसाद बास्कोटा भन्न थालेका पनि छन् । शुक्रबार साप्ताहिकबाट ।